အိုင်ဖုန်း 11 ဘို့ Apple ရဲ့စျေးနှုန်းမဟာဗျူဟာန်ဆောင်မှုများ၏ခေတ်သစ်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါသည် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom "အိုင်ဖုန်း 11 ဘို့ Apple ရဲ့စျေးနှုန်းမဟာဗျူဟာန်ဆောင်မှုများ၏ခေတ်သစ်ဘို့ပြီးပြည့်စုံ
အိုင်ဖုန်း 11 ဘို့ Apple ရဲ့စျေးနှုန်းမဟာဗျူဟာန်ဆောင်မှုများ၏ခေတ်သစ်ဘို့ပြီးပြည့်စုံ
ဤသည်နံနက်ပိုင်းတွင် program ကို CNBC Squawk Alley ဘဏ်အမေရိကတိုက်၏ Merrill Lynch, Wamsi Mohan မှာစျေးကွက်သုတေသန၏ကျောင်းအုပ်ကြီးလေ့လာဆန်းစစ် iPhone ကို 11 ဘို့ Apple ကစျေးနှုန်းများများ၏စျေးနှုန်းမဟာဗျူဟာချီးကျူးလိုက်သည်။ ဒီအကဆြုံး, ကုမ္ပဏီအစားအမေရိကန်ဒေါ်လာ၏အမေရိကန်ဒေါ်လာ 11 699 တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းစျေးနှုန်းမှာ iPhone အသစ် 749 (အိုင်ဖုန်း XR ဖို့ဆက်ခံ) ရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ တစ်ခုခုမှာ Mohan Apple ကပြကြောင်းပြသထားတယ် "နည်းဗျူဟာဖြစ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ဒိုင်းနမစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်။ " "
သေချာဖြစ်စေရန်, အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားလည်းရှိသေး၏။ ဤရွေ့ကား, Apple က Apple ကဂီတနှင့် Apple TV ကို + ရဲ့နောက်ထုတ်ဝေတူသော paid န်ဆောင်မှုအားဖြင့် ပို. ပို. ကြီးစိုးမိတ်ဆက်ခဲ့သည့်အတွက်ခေတ်သစ်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။
ဘင် Thompson ကကနေစာတစ်စောင် Stratechery ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ($$) အင်္ဂါနေ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်၏အဓိကသတင်းအဖြစ် iPhone ပေါ်မှာစျေးနှုန်းလျှော့ချရေးစဉ်းစား။
အဘယ်ကြောင့်နည်း ယင်း၏အခြေအနေတွင်သရုပျဖျောဖို့က iPhone ကို XR ကိုပိုမိုအဆင့်မြင့်ဗားရှင်း XS နှင့် XS မက်စ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းရောင်းချခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုမျဉ်းတား။ တောင်မှ Apple ရဲ့စီအီးအို Tim Cook က, ထို့နောက်အများဆုံးအဆင့်မြင့်က iPhone အတွက်ယခုအပတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ "ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, Thompson က Apple ကဖောက်သည်တစ်အများစုရဲ့အကောင်းဆုံးများအတွက်ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ " ဒီ XR လုံလောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကဖုန်းကိုအလုံအလောက်ထက်ပိုမိုဖြစ်ပါသည် - ကအစိုင်အခဲဖုန်းယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စိတ်ကူးပါတယ်။
Thompson ကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ကြှနျုပျတို့အစား "အသွင်ပြောင်းရေး" ၏ "အီဗိုလူးရှင်း" ကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်ရိုက် Apple ကဖှံ့ဖွိုးတိုးတန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှ (ကုမ္ပဏီရှင်းလင်းစွာအရှိဆုံးလူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ထင်သောမော်ဒယ်ပေါ်) ကိုစျေးနှုန်းလျှော့ချနေတဲ့မျဉ်းကိုဆွဲယူ ကုမ္ပဏီသိသာတဲ့လွှဲလျှင်အဖြစ် product အဖြစ်က iPhone ၏ရငျ့ရှိနေသော်လည်းက) မဟုတ်ဘူး။ စျေးနှုန်းလျှော့ချနိုင်အောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီမှာပါပဲ။
ပထမဦးစွာပြုလုပ်အများဆုံးဖုန်းရောင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဒါဟာသင် Apple ကဂီတများကဲ့သို့ပိုပြီးန်ဆောင်မှုရောင်းဖို့ကြိုးစားသောအခါလုပ်ချင်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ထိုမျှမကပဲန်ဆောင်မှုများ, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော Apple ကနာရီအဖြစ်ဖြည့်စွတ်ထုတ်ကုန်။
လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့် Apple စောင့်ကြည့်တဲ့အရေအတွက်က 11 က iPhone ၏စျေးနှုန်းလျော့ချရေးနှင့်အတူဆက်ဆက်ကျေနပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်ဝေသုတေသနမှတ်ချက်အတွက်မှတ်ချက်ပြုသူကို JP Morgan  CNBC အဖြစ် "ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဖြစ်ရပ် ... XR ကျော်က iPhone 11 ၏လျှော့ချစျေးနှုန်းကဦးဆောင်, High-end entry-level စမတ်ဖုန်းများ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် volumes ကိုများအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ထွက်လာ၏။
Apple ကပြောင်းလဲကွတ်အောက်တွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်: အဆိုပါစျေးနှုန်းမဟာဗျူဟာဆက်ဆက်ကျွန်တော်ကိုးကားနိုင်သောရမှတ်များအကြားနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုအောင်မြင်မှုဖြစ်ဆက်လက်ယုံကြည်ကြသည်။
ဤအတောအတွင်းအိုင်ဖုန်းရရှိနိုင်ပါသည် 11 ကြောင်းသတိရ: Pre-အမိန့်5နံနက်ပစိဖိတ်အချိန်မှာဒီသောကြာနေ့ကိုစတင်များနှင့်ဖုန်းကိုစက်တင်ဘာလ 20 ထံမှမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်
။ Image ကိုရင်းမြစ်: Apple က
Apple က Arcade: တစ်လလျှင် 4,99 ယူရိုတရာဂိမ်းန့်အသတ် access ကို
Windows ကို 10, 8 နှင့်7အောက်မှာသင့် hard drive ကို Defragmenting